Chigadzirwa Chekugadzira - Yuyao Jera Line Inokodzera Co., Ltd.
Jera iri kuzvipira pachayo kuti ibudirire mukana wekupa nekugadzira zvigadzirwa zvakavimbika uye zvakavimbika zvecommunication network mhinduro. Zvinoita kuti tirambe tichivandudza nekuvandudza kugona kwedu. Jera inoshandisa yazvino yekugadzira matekinoroji, mutengo-unoshanda kugadzirisa mhinduro uye michina michina kuwana yakakwira yakakwira kugona kwekugadzira.
Jera fekitori ine hunyanzvi hwe2500 mativi emamirimita, gumi nemaviri yeyuniti yekushandisa michina yakashandiswa mukugadzirwa kwemazuva ese.
Jera ine mawekishopu gumi ane matekinoroji anoenderana:
1) Fiber optic waya musangano
2) Plastic Kuumbwa workshop
3) Press yekuumba musangano
4) Helical waya achigadzira musangano
5) Zvishandiso zvekugadzira musangano
6) CNC muchina centre musangano
7) CNC lathes musangano
8) Aluminium uye zinc kufa kukanda musangano
9) Simbi yekugadzirisa musangano
10) Chigadzirwa gungano musangano
Jera mutsara uri kushanda zvinoenderana neIO 9001: 2015, iyo inotibvumidza kutengesa kune dzinopfuura makumi mana nyika nenzvimbo dzakaita seCIS, Europe, South America, Middle East, Africa, neAsia. Nokuramba tichivandudza zvivakwa zvedu zvekugadzira kuti tiite vanokwikwidza uye vanokwanisa kupa zvinonzwisisika zvinopihwa nemhando yepamusoro kune vatengi vedu.
Jera yakazvipira kupa mutengo wakanaka, chivimbo chemhando yepamusoro, kugadzirwa nekukurumidza uye sevhisi yeOEM kune vatengi vedu, ndapota inzwa wakasununguka taura nesu, chinangwa chedu chakazvipira kuvaka hukama hwakavimbika uye hwakareba.